Ishe weRings: Hondo inowedzera zviitiko zvishanu kupemberera Kisimusi | IPhone nhau
Iyo NetEase yekuvandudza inoda pemberera Kisimusi ino nevatambi vese kubva pazita idzva reJRR Tolkien's The Lord of the Rings: War. Mumazuva ano, tinogona kuwana mibairo yakatevedzana nekugadzirisa mapuzzle, kutamba bingo kana kutsvaga mepu iyo, vanoti, inovanza pfuma. Zvose izvi zviitiko zvakagadzirirwa kupinda mumweya wezororo mumazuva ano.
Ishe weRings: Hondo ichapa vateveri nekushanya kwakakosha kubva kune zvisinganzwisisike vatungamiriri mwaka uno. Vachauya vese vakaremerwa nezvipo zuva rega rega mutambi anoenda online, zvichiita kuti Mutambo weYule uwedzere kufadza.
Kwete kuve mudiki, Bilbo arikupembererawo mazuva ano neake puzzle dambudziko, uko vatambi vanogona kuedza kuzadzisa gumi mibairo yebhingo kuti vawane yakakosha Bilbo's Riddles bhonasi.
Kune rimwe divi, vatambi vanogona zvakare kutenga zvekushongedza vachishandisa yekushongedza matikiti kuenda Dhonza iyo yakakura Yule Muti muHobbiton uye uwane mibairo yekushongedza.
Mukuwedzera, ivo vachakwanisa kutanga gore idzva ne mabiko makuru panguva yekupemberera fireworks muHobbiton kubva Zvita 31 kusvika Ndira 1.
Wakagadzirira kupinda mune zvese zvinonakidza? Ishe weRings: Hondo iripo yekurodha pa IOS App Chitoro, in the Chitoro cheGirazi uye mu Google Play Store yezvigadzirwa zveApple.
Inowanikwa kune yako kudhawunirodha zvachose mahara uye inosanganisira kutenga mukati mekushandisa. Kana iwe uchida basa raJRR Tolkien, wakamirirei kuti uedze iyi zita?
Ishe weRings: Hondovakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Ishe weRings: Hondo inowedzera zviitiko zvishanu kupemberera Kisimusi
Mamwe maApple Watches ane nyaya dzekuchaja mushure mekugadzirisa kuWatchOS 8.3
Iyo iPhone inosimbiswa seyakanyanya kutengesa pasirese uye inobhadhara zvakanyanya 5G smartphone